မောင်မောင်စိုး – …. မှ တပါး အခြားမရှိ | MoeMaKa Burmese News & Media
တိုင်းရင်းသားမို့ မျက်ရည်ကိုသုတ်ပေးမလား တုတ်နဲ့ပဲ ရိုက်မလား (Han Maung Thein)
တူမောင်ညို - သမ္မတက နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ - အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မိန့်ခွန်း
မောင်မောင်စိုး – …. မှ တပါး အခြားမရှိ
၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နှစ်လသာလိုတော့သည်။ တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် များလည်း စပြီ။ လူထုအများစု၏ အာရုံမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲဆီသို့ ရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်။
ဤအချိန်တွင် မည်သူကိုမဲပေးမည်နည်း။ ဇဝေဇဝါဖြစ်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ လူထုအနေနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအပ အခြားမရှိဟု ဆိုရပေမည်။
NLD ၏ ကြွေးကြော်သံမှာ ပါတီကြည့်ပြီးမဲပေးပါဟုဆိုသည်။ အမှန်ပင် လက်ရှိဥပဒေတွင်း လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးတွင် NLD သည် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဆောင်သည့် အဓိကအတိုက်အခံပါတီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရပ်ခံထားသောပါတီဖြစ်သည်။ လူထုအတွက် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်နိုင်မှသာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖယ် ရှားနိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အစားထိုးနိုင်မည်။ တန်းတူရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မည်။ လွှတ်တော်တွင်းနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းသို့ NLD အမတ်များများပို့နိုင်မှလွှတ်တော်တွင်းမှ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသည် ပို၍ရှေ့တလှမ်းတိုးနိုင်ပေမည်။ လူထုအနေနှင့် လွှတ်တော်တွင်း အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် NLD မှအပ အခြားပါတီမရှိပါ။
အခြားပါတီများကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ၏ ပါတီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခြေဥက်ိုရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီး အခိုင်အမာကာကွယ်နေသောပါတီဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ မှ ယနေ့တိုင်အောင် အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်း၍ အုပ်ချုပ် နေသော်လည်း အနှစ်သာရကတမျိုးတည်းဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီးစစ်ဖက်အာဏာနှင့် တိုင်းပြည်ကိုချုပ်ကိုင်ထားသူများသာဖြစ်သည်။ ဤသို့သောပါတီကို လူထုအနေနှင့် မဲပေးဖို့ ရွေးချယ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
မဆလ တဖြစ်လဲ တစညပါတီသည်လည်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ၏ပါတီဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ၂၆ တိုင် ပြည်သူ များ ခါးသီးစွာခံစားခဲ့ဘူးပေပြီ။ ထပ်မံရွေးချယ်ရန်အကြောင်းမရှိတော့။ လူထုမပြောနှင့် သူ၏မူလရင်းမြစ် စစ်တပ်ကပင် ထောက်ခံခြင်းမရှိတော့။
NLD မှခွဲထွက်သော NDF ပါတီမှာလည်း အတိုက်အခံပါတီအဖြစ်မှ ကြံ့ခိုင်ရေး၏နောက်မြီးစွဲပါတီအဖြစ် ကိုယ့်စားရိတ်နှင့်ကိုယ်လျှောကျသွားပြီဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုအပ်တော့ပေ။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလိုပါတီငယ်အချို့ကတော့ သူတို့၏မူဝါဒဖြင့် ကေဒါပါတီအဖြစ် စည်းရုံးကြိုးစားနေကြသော်လည်း တပြည်လုံးအတိုင်းအတာ မဆောင်နိုင် သေးပေ။ သူတို့အတွက် အချိန်လိုအပ်နေသေးသည်။
အမျိုးသားရေး ဘာသာရေးအလံလွှင့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဝင်လာသော ပါတီများကားပိုရှင်းသည် ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုသည်ထက်ရွေးကောက်ပွဲကာလ ရှုပ်ထွေးစေသည့် ဖျက်မျဉ်းများသာဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အကျိုးမပြုသောပါတီများသာ ဖြစ်သည်။ မဲပေးဖို့အရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုအပ်သောပါတီများ ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါတီကြည့် ပြီး မဲထည့်ပါက NLD ပါတီမှအပ အခြားပါတီမရှိဟုဆိုရပေမည်။
• လူကိုကြည့်ပြီး မဲပေးပါ
အချို့ကလည်း ပါတီတင်မက လူကိုကြည့်ပြီး မဲပေးဘို့လိုသည်ဟု ဆိုသည်။ မှန်ပါသည်။ ငြင်းပယ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ လူကြည့်ကိုရပါမည်။ အဓိကပါတီခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်ရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပါတီတခု၏ ခေါင်းဆောင်သည် ပါတီတခုလုံးကို ထိန်းကျောင်းနေ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ထိုပါတီကရွေးချယ်လိုက်သော အမတ်လောင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို ပြည်သူများ မသိနိုင်ပါ။ ယုတ်ဆွအဆုံး မိမိမြို့နယ်မှ တိုင်း/ပြည်သူ့လွှတ်တော်/အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်သုံးယောက် အကြောင်းကို ထိုမြို့နယ်နေ ပြည်သူအများစု မသိနိုင်ပါ။ နီးစပ်သူများလောက်သာ သိနိုင်ပေသည်။
သို့သော် ပါတီ၏ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုတော့ လူတိုင်းသိပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်ဆိုလျှင် အားလုံး လိုသိကြသည်။ NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလျှင် လူတိုင်းသိကြသည်။ ထို့ပြင် ပါတီခေါင်းဆောင်ဆိုသည် မှာ ပါတီတခု၏ အခရာဖြစ်သည်။ သူ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်း သူ၏အရည်အချင်းဖြင့် သူ၏အမတ်များကို ထိမ်းကျောင်းမောင်း နှင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိပ်ပိုင်းဆောင်သည့်လူတွေ၏ အရည်အချင်း သဘောထားကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ကြရပေမည်။
ဤနေရာတွင် ပါတီငယ်တော်တော်များများ၏ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဆိုသူအများစုမှာ လူထုကြားတွင် သိရှိသူများမဟုတ်၍ လူကိုကြည့်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာပင်ဖြစ်မလာပါ။ မဲပေးမည့်လူအများစုကလည်း ပါတီအားလုံး၏ ခေါင်းဆောင်များသမိုင်း ကို တကူးတကန့် လိုက်လေ့လာနေမည်မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိအာဏာရပါတီနှင့် အဓိက အတိုက်ခံပါတီကြီး နှစ်ခု၏ ခေါင်း ဆောင်များကိုသာသိသည်ကတော့ အရှိတရားဖြစ်သည်။
လူကိုကြည့်လျှင် ဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုမပြောင်းလိုသူ ကာကွယ်သူဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲရေးဟု သမတ စတက်စဉ်က ကြွေးကြော်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ငြင်းပယ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအစိုးရ သန့်ရှင်းသောအစိုးရဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားနေသော အစိုးရအဖွဲ့အား မပြောင်းလဲနိုင်ရုံမက အဂတိလိုက်စားမှု လာဘ်စားမှုများ အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီတွင်း ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲကိုပင် အင်အားသုံးဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လူကိုကြည့်ပြီးမဲပေးရလျှင် ဦးသိန်းစိန်နှင့် သူ၏ပါတီဖြစ်သော ကြံ့ခိုင် ရေးအား မဲပေးစရာအကြောင်းမရှိပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရှိလူထုအများစု၏ လေးစားထောက်ခံမှုရရှိထားသည့်အပြင် ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ လေးစားထောက်ခံမှုကို ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ မှ ယနေ့ တိုင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး နိုင်ငံရေးက်ို ခြေစုံပစ်၍ သူ့ဘဝပေး၍ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဉာဏ်ပညာမြင့်မား၍ ထက်မြင့် သူဟု အများက အသိမှတ်ပြုခံထားရသူတဦးဖြစ်သည်။ လက်ရှိအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများထဲတွင် သူများထက် ခေါင်းတလုံးပိုမြင့်သူတဦးဖြစ်သည်။
ဤသို့ဆို၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒေါ်စုအား သူတော်စင်ဟု ဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဒေါ်စုတွင် အားနည်းချက်ရှိသည်မှာ မထူးဆန်းပါ။ အားနည်းချက်မရှိဟုဆိုလျှင်သာ ထူးဆန်းမည်ဖြစ်သည် ဒေါ်စု သည် နိုင်ငံရေးသမားတဦးအနေနှင့် သူမလုပ်ဆောင်ချက်ခြေလှမ်းများတွင် အမှားအချို့ ချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအမှားအားနည်းချက်ဆိုသည်မှာ အနဲစုဖြစ်ပေမည်။ ထို့ပြင် သူမ၏ အားနည်းချက်တွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာသည့် အားနည်းချက်မပါသည်ကတော့ သေချာသည်ဟု ဆိုရမည်။
ဆက်၍ပြောရလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လုပ်ရပ်တချို့သည် အာဏာရှင်ဆန်သည်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် သူမသည် အာဏာရှင်တဦးမဟုတ်သည်ကိုတော့ ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ ထို့အတူ သူမပါတီ၏ အမတ်လောင်းများတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနိုင်ကောင်းသည်။ သို့သော် သူတို့သည် တိုင်းပြည်သယံဇာတကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားခဲ့သူအာဏာအလွဲ သုံးစားပြု၍ ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့သူများမဟုတ်သည်ကတော့ သေချာသည်။
သို့ဖြစ်ရာ လူကိုကြည့်၍ မဲပေးရမည်ဆိုလျှင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏ NLD ပါတီကိုသာ မဲပေးရပေမည်။
တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအရ အဓိက အတိုက်ခံပါတီကို မဲပေးရမည်ဆိုသော်လည်း ချွင်းချက်တော့ရှိ၏။ ၎င်းမှာ ပြည်နယ် များရှိ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလများဖြစ်သည်။
မိမိပြည်နယ်အလိုက် တိုင်းရင်းသားများအနေနှင့် မိမိတို့တိုင်းရင်းသားပါတီအား မဲပေးခြင်းမှာ ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ ရိုးသားစွာ ယှဉ်ပြိုင်၍ အတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရေး ရှေးရှုရန်သာဖြစ်ပါသည်။
ထင်ရှား၍ လူထုကြားသြဇာရှိသော တသီးပုဂ္ဂလမှာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ အနည်းငယ်သာရှိ၍ ပြဿနာကြီးမဟုတ် ပါ။ ထိုသူတို့နိုင်လျှင်တောင်မှ NLD နှင့်ပူးပေါင်းရန် အခွင့်အရေးရှိသေးသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
သို့သော် ဤအချင်းအရာများမှာ ဒေသအလိုက်ထူးခြားချက်သာဖြစ်ပါသည်။ တခုလုံး တပြည်လုံးလက္ခဏာမဆောင်ပါ။
အချို့ကတော့ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သည့်ပါတီမှ မဲမပေးဟု ဆ်ိုသည်။ ရှင်းလင်းစွာမြင်ရသည်မှာ NLD မဲအရနည်း လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ပိုအားသာစေသည်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မဲပေးခြင်းမပေးခြင်းသည် လူတဦးချင်း၏ အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိအခွင့်ကိုကောင်းစွာအသုံးမချ၍ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ အားမနည်းစေသင့်ပါ။
အချို့ကတော့ လွှတ်တော်တွင်းတိုက်ပွဲကို အယုံအကြည်မရှိဟုဆိုသည်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များမှအပ လက်နက်ကိုင်တိုက်နိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမရှိပါ။ လွှတ်တော် လမ်းကြောင်းမယုံသူများလည်း မြေပေါ်တိုက်ပွဲနည်း နာတခုမဟုတ် တခုကျင့်သုံးနေသည်သာဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သည့် မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲနည်းနာ များတွင် လွှတ်တော်တွင်းတိုက်ပွဲလည်း တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲပုံစံအားလုံးသည် ပေါင်းစပ်ဘို့လိုသလို တဖက်နှင့်တဖက်အားဖြည့်ပေးဖို့ လိုသည်။ အထူးသဖြင့် မိမိတိုက်ပွဲတွင် ဒေါ်စုနှင့် NLD က အားဖြည့်မပေး မထောက်ခံ၍ ပစ်တင်ခဲ့သူများသည် ဒေါ်စုနှင့် NLD ၏ တိုက်ပွဲတွင် အားဖြည့်ပေးရန် ပို၍ပျက်ကွက်ရန်မသင့်ပေ။
အထူးသဖြင့် လာမည့်နှစ်လအတွင်း NLD နှင့် သူအားထောက်ခံသောလူထု၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုံးပမ်းမှုအား အသိ မှတ်ပြု အားဖြည့်ပေးရန်လိုသည်။ အားဖြည့်ပေးခြင်းမရှိရုံမက ထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်ပါက လူထု၏စိတ်ပျက်ခြင်းကို ခံရ ပေမည်။ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ပြတ်သားသော သီအိုရီ အန္တိမရည်မှန်းချက်များရှိရုံနှင့်မပြီး အခိုင်အမာ လက်တွေ့အခြေ အနေများကို ကြည့်မြင်သုံးသပ်ကျင့်သုံးဘို့ လိုအပ်သည်။ ပကတိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ခြေလှမ်း များလိုအပ်သည်။
• … မှတပါး အခြားမရှိ
ကြီးသည် ငယ်သည် မြင့်သည် နိမ့်သည်ကောင်းသည် ဆိုးသည်ဆိုသည်အားလုံး နှိုင်းယှဉ်မှုအရဖြစ်သည်။ နှိုင်းရတရားဟု ဆိုကြသည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ မဲပေးရန် NLD မှအပ နှိုင်းယှဉ်ရွေးစရာ အခြားပါတီမရှိပါ။ ဤ ကား ပကတိအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ လွှတ်တော်တွင်းအားကောင်းစေရန်လည်း ကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ရှေ့ရှုသော အစိုးရတရပ် ပေါ်လာစေရန်သော်လည်းကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD မှအပ အခြားရွေးချယ်ရန်မရှိဟု ဝေဖန်သုံးသပ်ရပါသည်။